Wararka - Qalab joogta ah | Wararka Gadget (Bogga 2)
Sonos wuxuu ku dhawaaqayaa cusboonaysiinta Sonos Beam, barkeeda sanqadha ee telefishannada leh isku xirnaanta caqliga leh iyo kaaliyaha dalwaddii.
RoboVac X80 iyo HomeVac H30, hami cusub ayaa ka soo baxa eufy
RoboVac X80 oo ay ugu yeeraan nadiifiyuhu robotka ugu horumarsan ee suuqa, iyo nadiifiyaha faaruqinta ee HomeVac H30.
Dhawaan Philips wuxuu qabtay dhacdo aad u xiiso badan oo dalwaddii ah oo aan awoodnay inaan ka qaybgalno oo aan ku qabannay kuwa ...
Jabra waxay cusboonaysiisaa kala -soockeeda wax -soo -saarka iyada oo leh saddex madax oo taxane Elite ah
Jabra waxay soo bandhigaysaa Elite 3, Elite 7 Pro iyo Elite Active, dhagaha dhagaha cusub ee dhagaystayaasha oo dhan.
Huawei Watch 3 iyo FreeBuds 4, oo ku sharxaya dhamaadka sare ee dharka la gashado
Huawei wuxuu suuqa u rogaa dhinaca cusub ee Huawei Watch 3 iyo Watch 3 Pro oo ay weheliso dhawaqa ugu fiican oo leh aaladaha dhegaha ee TWS FreeBuds 4.
Huawei wuxuu bilaabay MateBook X Pro 2021, laptop-kiisa ugu dambeeya oo leh shaashadda 3k
Huawei wuxuu boos ka helaa suuqa sare ee iswaafaqsan, oo leh koox awood u leh inay qabato waxqabad kasta, iyadoon loo eegin sida ay u baahan tahay.
Gabdhaha Rasmiga ah ee Maalinta ICT: Waxaan la sheekeysaneynaa Fran del Pozo, oo ka socda Code.ORG
Maanta oo ay taariikhdu tahay Abriil 22, 22 waa maalinta caalamiga ah ee rasmiga ah ee gabdhaha ku jira ICT-da waxaanan la sheekeysaneynaa wakiillada Code.ORG.
Huawei wuxuu bilaabay daabacaadda 'Fit Fit Elegant', oo ah midka ugu raqiisan smartwatch
Xubintan cusub ee ka tirsan qoyska Huawei Watch waxay soo bandhigeysaa dhameystir labo midab oo cusub ah, Frosty White oo isku dhafan ...
Sonos wuxuu soo bandhigayaa Roam-keeda cusub, wireless badan oo la qaadi karo
Sonos Roam waa aalad maqal cusub oo wireless ah oo ka socota shirkadda Waqooyiga Ameerika oo kaamil ah fikradda Dhaqdhaqaaqa waxayna ballanqaadaysaa inay naga xoreyn doonto fiilooyinka.
Huawei wuxuu soo bandhigayaa beta-ka rasmiga ah ee HarmonyOS 2.0 taleefanka gacanta
HarmonyOS BETA 2.0 waxay u timid si loo fududeeyo hufnaanta horumarinta arjiga, waxay siisaa APIs aad u tiro badan iyo aalado awood badan.
Sonos Arc wuxuu qaataa LPCM multichannel iyo heshiisyo cusub oo jimco ah
Arc waxay hadda taageertaa marin-fara badan oo loo yaqaan 'LPCM', oo keeneysa waayo-aragnimo cusub oo dhawaq ah oo loogu talagalay cayaaraha, cajaladaha Blu-ray, iyo inbadan.
Sonos waxay soo saartay Arc, barxad dhawaaqeed iyo alaabooyin badan
Taasi waa sababta Sonos u go'aansaday inuu soo saaro Arc, oo ah bar dhawaaq ah oo u yimaada inuu beddelo Playbar iyo sidoo kale Shan iyo Sub.
Sonos waxay macaamiisheeda u soo bandhigtay raadiyaha Sonos gaar ah oo bilaash ah
Ku hadlayaasha Sonos waxay heleen casriyeyn isku dhafan Sonos Radio, oo ah adeeg raadiyaha gaar u ah baahinta dhammaan macaamiisheeda leh muusig heegan ah.
Xog ururin ku jirta Webka Madow oo leh 267 milyan oo ah xisaabaadka isticmaalaha Facebook
Mar labaad shabakada bulshada ee Facebook waxay ku lug leedahay dhibaato xagga amniga ah oo markan 500 oo euro waxaad ka iibsan kartaa xogta isticmaale dhammaystiran ee Webka Dark
Huawei P40 Lite E: Saddex kamarad oo qiime jaban ku fadhiya
Waxaan si qoto dheer wax uga ogaan doonnaa Huawei P40 Lite E cusub, ma awoodi doonaa inay bixiso kamarad wanaagsan oo leh qiime ka hooseeya 200 euro?
Huawei P40 Pro - Daaweynta iyo tijaabooyinka ugu horreeya
Nala soo xariir sanduuqa sanduuqa cusub ee Huawei, P40 Pro, oo leh astaamaheeda oo dhan iyo waxaad u baahan tahay inaad ka ogaato waxyaabaha cusub.
Huawei P40 Pro iyo P40 +, Huawei-dhamaadka sare ee cusub [toos ah]
Tani waa Huawei P40 Pro iyo P40 Pro + cusub, qiimaheeda, astaamaheeda iyo wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato boosteejooyinka.
Ka hel macluumaad ku saabsan 'Covid-19' oo ay la socoto WHO Health Alert oo ku taal WhatsApp
WHO iyo WhatsApp ayaa isu yimaada si ay u wargeliyaan una soo bandhigaan xogta dhabta ah ee aafada Covid-19 ee saameysa meeraha
Warshadaha casriga ah ayaa ku soo laabtay waxqabadkii Shiinaha
Laga soo bilaabo Shiinaha waxaan aragnaa sida warshadaha casriga ah ay u bilaabaan inay yeeshaan waxqabad waxaanan bilaabaynaa inaanu soo bandhigno aalado cusub
Switzerland waxay jareysaa marin u helka adeegyada dhijitaalka ah.
Iswiiska gudaheeda mas'uuliyiintu waxay tixgelinayaan inay xaddidaan gelitaanka shabakadda si aysan u dhergin nidaamyada iyo in wada-shaqeynta teleefonku si fiican u shaqeeyaan
Kheyraad Bilaash ah oo lagula tacaalo Karantaroolka fayraska 'Coronavirus'
Tan iyo markii Dowlada Spain dhaqaajisay xaalada digniinta, Isbaanishka waxaa lagu qasbay inay guryahooda joogaan, ...
Codsiga miDGT hadda si rasmi ah ayaa loo heli karaa
Hada codsigii miDGT si rasmi ah ayaa loo bilaabay waxaadna kala soo dagsankartaa labada iPhone iyo terminal-kaaga Android.
Haddii aad ka heshay WhatsApp taleefanka 632282524 oo sheeganaya inaad tahay Wasaaradda Caafimaadka, ha ka nixin, gabi ahaanba waa been.
Dukaanka internetka ee Huawei eStore waxaa lagu heli karaa dalabyo
Laga bilaabo maanta, Maarso 2, Huawei wuxuu furay dukaankiisa internetka wuxuuna ugu dabaaldegaa dallacsiin xiiso leh dhammaan isticmaaleyaasha.
Huawei P40 Lite, waa bartamaha dhexe ee shirkadda Aasiya
Qalabka cusub ee Huawei waxaa lagu soo bandhigay nashqad aad u dhiirran, afar kamaradood iyo lacag deg deg ah oo ku jirta heerka ugu sarreeya.
Barta 'Instagram' aad ayey ugu mashquulsan yihiin inay soo saaraan nooc iPad ah
Hagaag, Maamulaha guud ee Instagram wuxuu cadeeyay inay aad ugu mashquulsanyihiin sameynta nooc iPad ah.
Samsung Galaxy Buds +, dhalo isku sifooyin kala duwan
Galaxy Buds +, samaacadaha TWS ee ka yimaada Samsung oo aan dib u cusboonaysiin muuqaalkooda gabi ahaanba, laakiin taasi waxay helaysaa ismaamul.
Panasonic wuxuu soo bandhigayaa GZ2000, TVga adduunka ugu filimada badan
Panasonic wuxuu soo bandhigayaa telefishankiisa cusub ee GZ2000, telefishanka ugu filimada badan kaas oo si buuxda loogu raaxeysto khibrada Dolby Atmos
Huawei FreeBuds 3, waxaan ku falanqeyneynaa daabacaadda cusub casaan
Waxaan haynaa Huawei FreeBuds 3 oo casaan ah, joog si aad u aragto falanqayntayada iyo dhammaan qaababka ay ku leedahay dib u eegistaan ​​faahfaahsan.
Gegada diyaaradaha ee Barajas ee magaalada Madrid waxay isu diyaarineysaa soo deg deg deg deg ah
Wax walba waxay diyaar u yihiin diyaaradii ay ku duuli lahayd Kanada oo ku dul wareegeysa Madrid korkeeda si ay u sameyso deg deg deg deg ah
La soco horumarka Coronavirus-ka adduunka oo dhan waqtiga dhabta ah
Soo ogow sida aad ula socon karto horumarka Wuhan Coronavirus waqtiga dhabta ah adoo adeegsanaya khariidad is-dhexgal leh.
Disney + waxay imaan doontaa Yurub waqti kahore intii lafilaayay
Disney +, oo ah barnaamijka 'Mickey Mouse' ayaa ka degi doona Spain bisha Maarso 24 si ay ula kulmaan Netflix, HBO iyo Amazon Prime
Ka hel Realme X2 Pro mid ka raqiisan sidii hore
Realme, oo ah shirkadda hoosaad ee Oppo, ayaa sii wadaysa sharad ay ku bilaabi doonto dalabyo wadno-istaag ah oo ka dhigaya aaladeeda inay is-taagto ...
Dell wuxuu soo bandhigayaa Fikradda UFO, "nambarkiisa" ee Nintendo Switch
Waxaan awoodnay inaan ogaano soo jeedinta Dell inay soo bandhigto qalab yar oo loogu talagalay cayaartoyda awood u leh inay bixiyaan dhamaan awooda Alienware pc
Huawei waxay dukaan cusub ka furatay Madrid, waanu ku tusinaynaa
Dukaanka cusub ee Huawei wuxuu sidoo kale ku yaalaa caasimada Spain furitaankiisana waxaa ku hareeraysan hadiyado iyo warar.
Apple wuxuu iska diiwaangeliyaa patent-ka Touch ID shaashadda
Apple waxay diiwaangashatay shati shati oo taariikhi ah shalay si ay iskudhafto ID-ka Aqoonsiga ee shaashadda waxayna la noolaan kartaa Face ID-ka iPhone-ka soo socda
Nalalka casriga ah iyo alaabooyinka kale si loo bixiyo Kirismaska
Waxaan kusii wadeynaa otomaatiga guriga, alaabada kuxiran guriga iyo alaabada nalalka caqliga badan ee aan aad ujeclaysanay inta lagu gudajiray sanadkaan 2019 si aad xaq uguhesho Kirismaskaan.
Sameecadaha ugu fiican ee la bixiyo xilliga Kirismaska
Waxaan soo qaadaneynaa isku soo uruurinta samaacadaha dhagaha ee ugu fiican ee aad bixin karto Kirismaska, ha moogaanin maxaa yeelay waxaa jira dhagaha dhagaha oo dhamaan qiimayaasha.
Nooca dhexe ee Nokia 5G waa mid aad isugu dhow
Muddo bilo ah hadda, waxaan ka akhrinaynay warbaahin kaladuwan qaybteena in Nokia ay si aad ah ugu sharadayso 5G….
Waxaan wareysaneynaa Fabián Gumucio, madaxa Rakuten Kobo ee Spain
Waxaan ku raaxeysanay wareysiga Fabián Gumucio, madaxa Rakuten Kobo ee Yurub: "Qofka nala tartamaya ma ahan Amazon, waa Netflix iyo DAZN".
Huawei Mate 30 Pro horey ayaa loogu iibiyaa Spain
Hadda waxaad ka iibsan kartaa Huawei Mate 30 Pro Spain gudaheeda 1.099 euro, ma rabtaa inaad mid hesho? Waxaan kuu sheegeynaa meesha aad aadeyso.
Facebok Pay: waa nidaamka lacag bixinta mobilada ee WhatsApp iyo Instagram
Facebook Pay, beddelka Bizum iyo nidaamyada kale ee lacag bixinta mobilada ee iman doona WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram.
Kuwani waa ciyaaraha Google Stadia ay ku dari doonto bilowgeeda
Waa maxay madal ciyaarta fiidiyowga oo aan lahayn liis garayn wanaagsan? Kuwani waa ciyaaraha fiidiyowga ee Google Stadia ay ku dari doonto maalinta la soo bandhigo.
Energy Sistem iyo Decathlon waxay aqbali doonaan Bizum oo ah qaab lacag lagu bixiyo
Hada Decathlon iyo Energy Sistem waxay ku biirayaan aruurinta Bizum si loo fududeeyo lacagaha looguna fududeeyo macaamiisha.
Buugga Philips Hue wuxuu ku koray Spain wuxuuna cusboonaysiiyaa badeecooyin badan
Waxaan kaqeyb galnay soo bandhigida rasmiga ah ee buuga la cusbooneysiiyay ee Philips na siiso inta udhaxeysa alaabada Hue within.
Apple wuxuu bilaabayaa iPhone 11 iyo iPhone 11 Pro: Qiimaha, Taariikhaha iyo Astaamaha
Waxaan kuu sheegeynaa dhammaan wararka ku saabsan iPhone 11 iyo kan cusub ee iPhone 11 Pro, aan aragno waxa astaamahoodu yihiin, qiimahooda iyo taariikhda ay soo baxayaan.
Shukaansiga Facebook waa barta cusub ee Facebook
Hadda Facebook wuxuu kaloo doonayaa inuu bartilmaameedsado codsiyada shukaansiga iyo la kulanka jacaylka iyadoo loo marayo Facebook Dating, Facebook's Ginder.
Qalabka aan seegi karin inuu dhammaado xagaaga [SWEEPSTAKES]
Waxaan kuu soo qaadaneynaa aalado qalab ah oo ay tahay inaadan dhaafin inaad dhammeyso xagaagan oo aad sida ugu badan uga faa'iideysato 'Cellularline'.
Harmony OS, Huawei waxay si rasmi ah ugu dhawaaqeysaa nidaamkeeda hawlgalka
Waxay ahayd wax dad badani sugayeen isla subaxdaasna Huawei waxay samaysay OS-keeda rasmiga ah ee qalabka iswada ee xiga ee OS
Exynos 9825: processor-ka Galaxy Note 10
Soo ogow wax walba oo ku saabsan Exynos 9825, processor-ka aan ka helno Galaxy Note 10 oo horeyba si rasmi ah loogu soo bandhigay.
Kani waa Samsung Galaxy Note 10 iyo Note 10+, wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato
Nagala soo baar waxa ay yihiin dhammaan astaamaha farsamo ee Samsung Galaxy Note 10 iyo sidoo kale midabadiisa cusub.
Netflix waxay kordhisaa qiimaha macaamiisha duugga ah laga bilaabo Sebtember
Ka ogow wax badan oo ku saabsan kor u kaca qiimaha Netflix ee macaamiisha hadda jira ee horeyba ugu lahaa koontada barta internetka ee Mareykanka.
Acer wuxuu lammaane ka noqdaa barnaamijka FARST LEGO League ee Spain
Acer wuxuu lammaane ka noqdaa barnaamijka FIRS TLEGO League ee Spain. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan taageerada shirkadda ee dadaalkan.
Waxa lagu arko Netflix, Movistar + iyo HBO bishii Ogosto
Waxaan halkaan ujoognaa isku dubaridka waxyaabaha ugufiican maqalka maqalka oo ay bixiyeen aaladaha madadaalo ee maqalka maqalka ah ...
Sida loo daawado dhamaan FC Barcelona iyo Real Madrid CF preseason si bilaash ah
Waxaan kuu sharaxeynaa sida aad u daawan karto FC Barcelona iyo Real Madrid CF kulamada bilaashka ah xilli-ciyaareedka 2019-2020 ee bilaaban doona.
Kani waa dukaanka ugu weyn ee Huawei adduunka ku yaal, oo laga furay Madrid
Dhowr saacadood ka hor waxaan ka qayb galnay munaasabad caalami ah oo muhiim ah, waxaan goob joog ka ahayn furitaanka gaarka ah ee ...
Mareykanku wuxuu qaadacay codka diidmada qayaxan ee Huawei, hadda maxaa dhici doona?
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan dhamaadka diidmada qayaxan ee Mareykanka ee Huawei, taas oo u oggolaanaysa shirkadda inay mar labaad kala xaajooto shirkadaha Mareykanka.
Kuwii lagu soo eedeeyey dambiyo ka dhan ah hantida aqooneed ee masuulka ka ahayd shabakada Taxanaha Yonkis waa laga siidaayey eedeymahoodii
Huawei wuxuu lacag ugu celin doonaa dadka isticmaala haddii aysan ku wadi karin barnaamijyada Facebook ama Google moobiilkooda
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan cabirka ay Huawei ku soo bandhigto Filibiin, oo ay ku soo celin doonaan lacag haddii ay dhacdo in adeegyada Google aysan shaqeyn.
Joan Monrabá (Colt) wuxuu ka hadlayaa isku xirnaanta ganacsiga mustaqbalka ee Isku xirka Warbaahinta
Waxaan fursad u helnay inaan la hadalno Joan Monrrabá, oo ah madaxa shirkadda Colt ee dalka Spain, oo ah shirkad hormuud u ah xallinta isku xirka ganacsiga.
Google wuxuu soo bandhigayaa dhammaan faahfaahinta rasmiga ah ee ku saabsan Stadia
Soo ogow dhammaan faahfaahinta Google Stadia, oo ah barxadda loogu talagalay soo dejinta ciyaaraha shirkadda oo si rasmi ah loo bilaabi doono bisha Nofembar.
Realme 3 Pro ayaa durbaba lagu iibinayaa Spain iyadoo laga soo iibsaday € 199
Qalabka qiimaha jaban ee sumadda Realme, oo ah qeyb ka mid ah xaafadda Oppo, ayaa si xaqiiqo ah ku yimaada Spain iyadoo qiimaha uu ka bilaabmayo € 199.
Waa kuwan waxa ku cusub watchOS 6 iyo tvOS 13
Apple waxay na tuseysaa astaamaha cusub iyo dhamaan wararka ku jira watchOS 6 iyo tvOS 13. sacab fara badan oo wanaajin ah oo loogu talagalay qalabkeena
Facebook wuxuu raacayaa mid u gaar ah wuxuuna qorsheynayaa soo saarista cryptocurrency GlobalCoin
Mark Zuckerberg wuxuu sii wadaa ganacsigiisa wuxuuna qorsheynayaa inuu soo bandhigo cryptocurrency. Tan waxaa loogu yeeri lahaa GlobalCoin
Xogta shaqsiyadeed ee kumanaan saamileyaal ah oo 'Instagram' ah ayaa la helay
Kumanaan ka mid ah xogta shakhsiyaadka saamaynta ku leh ayaa lagu dhex helay xog ururin ay ku jiraan lambarrada taleefannada iyo emayllada
Marka hore waxay ahayd Alexa, haddana Sonos sidoo kale wuxuu isku darayaa Kaaliyaha Google
Sonos wuxuu sii wadaa inuu ka shaqeeyo bixinta dadka ugu hadalka badan uguna caqliga badan suuqa, isagoon ka tagin wax ka badan tayada lagu guuleystay ...
Sida loo waco Amazon Echo-kaaga oo leh Alexa
Alexa oo ah kaaliyaha dalwaddii ah iyo Amazon Echo oo ah afhayeenka caqliga leh waa laba shey oo soo galay ...
Sonos wuxuu hagaajiyaa qaybaha Sonos One ee jiilkan labaad
Sonos waxay go'aansatay inay cusboonaysiiso qaybaha gudaha ee Sonos One sidaasna waxay ku siisaa jiil labaad Bluetooth Low Energy iyo waxyaabo cusub oo cusub.
Shabakadda (WWW) waxay u dabaaldegeysaa: waxay noqonaysaa 30 jir
Wax badan ka ogow 30-guuradii ka soo wareegtay markii la aasaasay World Wide Web, asalkeeda iyo horumarkiisa, iyo sida ay muhiimka noogu tahay maanta.
Huawei Mate X, taleefanka cusub ee isku laaban ee u taagan Galaxy Fold
Waxaan kuu sheegeynaa wax walba oo ku saabsan Huawei Mate X cusub, taleefanka u imanaya inuu wajaho Samsung Galaxy Fold cabsi la'aan.
Shabakadda Vodafone ayaa sii baaba’eysa, taasoo ka dhigeysa kumanaan macaamiil ah internet la’aan
Vodafone waxaa ku dhacay burburin weyn oo ka dhigeysa kumanaan isticmaale internet la’aan. Laga soo bilaabo Vodafone waxay ku dhawaaqayaan inay ka shaqeynayaan
Khabiirka Jorge Rey wuxuu ka hadlayaa amniga shabakada
Waxaan kugu martiqaadeynaa inaad aqriso wareysiga aan la yeelanay Jorge Rey oo, jidka ag fadhido, ka feejignow halista ay leedahay internetka adduunka.
TheAwards ayaa abaalmarinaya barnaamijyada Isbaanishka ugu fiican iyo ciyaaraha 2018
Bishii Nofeembar 15, xukunkii abaalmarinta TheAwards 2018 ayaa loo dabaaldegay, daabacaadii koowaad ee la siiyay codsiyada ugu wanaagsan ee Isbaanishka ee 2018.
Xiaomi Vacuum 2 oo ah € 348 iyo kuwa kale oo kali ah oo laga helo TomTop
Waxaan kaa soo qaadaneynaa gacanta TomTop dalabkii ugu fiicnaa ee Xiaomi Vacuum 2 iyo dalabyo kale oo xiiso leh Maalinta Singles.
Ka sii joog heshiisyada 11.11 mahadsanid eBay
Soo ogow waxyaabaha ugu fiican ee eBay ay nooga tagto munaasabadda 11.11. Dukaanka caanka ah wuxuu keenaa qiimo dhimis dhammaan qaybaha.
Dhammaan wixii ku saabsan Google Pixel 3, Google Slate iyo aaladaha cusub ee Google
Nala joog oo soo hel dhammaan badeecooyinka cusub ee ka imanaya gacanta Google Pixel 3, iyo sidoo kale Google Slate cusub.
Immisa xog ah ayaa Spotify cuntaa?
Waxaan kuu sharaxeynaa inta data Spotify ay ka isticmaalayso heerkaaga si aad u ogaato sida loo maareeyo marka aad dhageysaneysid muusikada aad jeceshahay.
Waa maxay Chromecast?
Qoraalkan waxaad ka heli doontaa hagaha saxda ah ee Chromecast iyo wax kasta oo aad ku sameyn karto qalabkan cajiibka ah ee Google.
Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato shabakadaha 5g
Taasi waa sababta aan u dooneyno inaan u sharaxno wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato shabakadaha 5G, astaamahooda iyo sida ugu badan ee looga faa'iidaysan karo.
Amazon Prime ayaa kor u kacday qiimaha iyo qiyaasta ilaa € 36 sanadkii
Haddii aad haysato ama aad ka fekereyso inaad hesho rukhsad loogu talagalay Amazon Prime, waa inaad ogaataa in sicirka la kordhiyay: aan ka badneyn bixinta .19,95 XNUMX sanadkii.
Samsung Galaxy Tab S4 hadda waxaa laga heli karaa Spain
Waqtigan xaadirka ah, suuqa kaliya waxyaabaha kale ee halista ah, ama tayada loogu yeero si uun, suuqa ...
Barcelona iyo gaar ahaan Granollers, waa meesha loo xushay Mi Miiga soo socda
Shalay ayaa Xiaomi Mi 8 si rasmi ah u yimid dalkeena maantana waxaan helnay warka ah ...
Gmail for Android horeyba waxay noo ogolaatay inaan tirtirno dirista emaylka
Xaqiiqdii waxay ku dhacday in ka badan idinka mid ah kahor intaadan akhrin email si aad u hubiso in si sax ah loo qoray iyo in ay muujisay dhammaan inkasta oo dib u dhac dheer, iyo ka dib markii laga heli karo Android, Gmail for Android ugu dambeyntii waxay noo ogolaaneysaa inaan joojino dirista emayllada horey loo diray
Midowga Yurub waxay rabaan in baraha bulshada ay saacad gudaheed uga saaraan waxyaabaha ku jira xagjirnimada
Shabakadaha bulshada iyo codsiyada farriinta ayaa noqday habka ugu wanaagsan ee lagu wada xiriiri karo, kaliya ma ahan saaxiibadeena iyo qoyskeenna, laakiin Midowga Yurub wuxuu ka shaqeynayaa qabyo qoraal ku qasbaya dhammaan bogagga internetka inay tirtiraan waxyaabaha xagjirnimada ku jira hal saac wax ka yar daabacaadda.
Immisa nooc oo HDR ah ayaa jira oo maxay ku kala duwan yihiin?
Waxaa jira noocyo kala duwan oo HDR ah, mid walibana leh awooddiisa laakiin dhammaantood isku nuxur leh, aan aragno sida ay ugu kala duwan yihiin.
Mashable wuxuu ka digayaa jabsiga weyn ee akoonada Instagram
Waxay u muuqataa in galabta loo wareejinayo boqolaal isticmaaleyaal ah shabakada caanka ah ee bulshada ee Instagram, iyo ...
Ma haysaa qalab Samsung Galaxy ah? Soodejiso Fortnite APK
Taasi waa sida ugu fudud ee aad u soo dejisan karto Fortnite APK taleefankaaga Samsung Galaxy, illaa intaad mid ka mid ah moodooyinka iswaafajinaya karti u yeelato.
Galaxy Watch iyo Galaxy Home, waxaan kuu soo bandhigeynaa badeecooyinka cusub ee Samsung
Iyada oo loo yaqaan 'Galaxy Watch' waxaan ku helnay smartwatch leh naqshad goobeed, waxaana la soo bandhigay Galaxy Home, oo ah afhayeenka caqliga badan ee HomePod, oo la tartamaya.
Kuwani waa boosteejooyinka lagu cusbooneysiin karo Android Pie wixii hadda ka dambeeya
Waxaan kuu sheegeynaa kuwa ay yihiin boosteejooyinka horay loogu cusbooneysiin karo Android Pie iyo kuwa heli doona cusbooneysiinta toddobaadyada soo socda.
Logitech waxay bilaabeysaa xeedho wireless iyadoo lala kaashanayo Apple
Xaaladdan oo kale, Apple iyo Logitech mar kale ayay gacmaha is qabsadeen, markanna waxay ku siinayaan xeedho wireless ah oo naqshad gaar ah leh
Android 9 Pie, waxay ku sii socotaa taariikhda la filayo inay bilaabato oo horeyba waa rasmi
Ilo wareedyada qaar ayaa dhigay rasmiga rasmiga ah ee nuucaan ah bisha soo socota ee Ogosto 29, laakiin ugu dambeyntiina cusub ...
Fayraska kumbuyuutarka ee ku jira TSMC wuxuu keenaa dhibaatooyin soo saarista Apple, NVIDIA ama Qualcomm
Fayrasku wuxuu u keenaa TSMC inuu yeesho dhibaatooyin soo saar qashin ah. Raadi wax badan oo ku saabsan dhibaatooyinka soo-saaraha soo saaraha fayraska awgiis.
Kuwani waa bilaashka PlayStation Plus iyo Xbox Live Gold ee bisha Ogosto 2018
Xilliga xagaaga ayaa yimid, PlayStation Plus waxaa ku jira ciyaaraha bilaashka ah ee Ogosto ee Mafia III iyo Xbox Live Gold oo ku sharxan For Honor.
Liiskani wuxuu kuu sheegayaa adiga haddii taleefankaaga Android uu la jaan qaadi karo Fortnite
Waxaan ku tusineynaa liiska qalabka ku habboon Fortnite ee loogu talagalay Android, ha moogaanin oo soo ogow haddii taleefankaaga casriga ahi awood u leeyahay inuu maamulo.
Google waxay soo rogtay sharciyo cusub si aan qaan u u soo gaarin nidaamka deegaanka ee wareega
Sanadkii la soo dhaafay, markii shirkadda Mountain View ku saleysan si rasmi ah u shaacisay moodooyinka cusub ee Pixel, waxay ku jees jeesay tirada ka kooban midka cusub. Sida laga soo xigtay Google, tilmaamaha cusub ee ku saabsan qaadashada lambarka iyo goobta uu ka kooban yahay shaashadda ayaa xaddidan kiisaska soo socda.
Shirkadda Huawei ayaa dhaaftay shirkadda Apple waxayna noqotay shirkadda labaad ee soo saarta taleefoonnada ugu badan adduunka
Shirkadda Aasiya ee Huawei, ayaa hadda soo saartay natiijooyinka maaliyadeed ee rubuca labaad ee sanadkan socda, a ...
Ma waxaad u socotaa Andorra? Xiaomi waxay diyaarineysaa furitaanka Mi Store-keedii ugu horreeyay ee Andorra la Vella
Dhibaatada ka dib markii ay ku hayeen dukaanka Zaragoza bilowgii waxayna dib u dhigeen furitaanka ilaa ugu dambeysay ...
Qalabka Aukey ugu fiican ee aadan seegi karin xagaagan
Laga soo bilaabo gacanta Aukey waxaan rabnaa inaan kaa soo qaadno alaabooyin iyo aalado kaladuwan oo wanaagsan oo aadan seegi karin xagaagan si aad uga faa'iideysato ciidahaaga.
HP waxaa loo caleemo saaray inuu hogaamiye ka noqdo iibinta PC-ga Spain
HP ayaa hogaamisa iibinta kumbuyuutarrada Spain. Ka ogow wax badan oo ku saabsan iibinta kombuyuutarka rubuc labaad ee sanadkan Spain.
Websaydhka YouTube wuxuu horeyba kuu oggolaanayaa inaad aragto fiidiyowyo toosan oo aan dhinacyada ku kala bixin
Kuwo badan ayaa adeegsadayaasha ah oo fiidiyowyo u duuba si toosan, in kasta oo aysan ahayn qaabka ugu habboon ee ...
Miyaan ku ordi karaa Fortnite kombuyutarkayga? Kuwani waa shuruudaha ugu yar ee ciyaarta moodada
Kuwani waa shuruudaha ugu yar ee awood u leh inay si hufan ugu shaqeeyaan Fortnite kombiyuutar kasta.
Waa maxay Baasaboorka Telegram iyo sida loo istcimaalo
Baasaboorka Telegram, oo ah adeeg isku dhafan gudaha Telegram oo ku saleysan xannibaadda noo oggolaan doonta inaan isku aqoonsanno degellada websaydhada iyada oo loo marayo xogta shaqsiyadeed.
Apple HomePod wuxuu lahaan doonaa taageero wicitaan wuxuuna kuhadli doonaa Isbaanishka dhawaan
HomePod waxay soo bandhigaysaa taageerada wicitaanada. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan waxa goor dhow ku soo socda afhayeenka Apple deyrtan.
Google waxay ku dhawaaqeysaa dhacdo horumariye cusub bisha Nofeembar
Xaaladdan oo kale, shirkadda xarunteedu tahay Mountain View, California, waxay ku dhawaaqeysaa dhacdo cusub oo diiradda lagu saaray ...
Facebook ayaa xannibaya kuwa ka yar 13 sano
Facebook ayaa xayiraysa xisaabaadka carruurta ka yar 13 sano. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan tallaabooyinka cusub ee shabakadda bulshada si loola dagaallamo akoonnadan.
Diiwaangeli Amazon iyada oo in kabadan 100 milyan oo badeecooyin ah la iibiyay intii lagu jiray Maalinta Koowaad
In kasta oo adeegsadayaal badan, Maalinta Koowaad aysan waxba ka qorin guriga marka laga hadlayo dalabyada ay bilaabeen ...
Shirkadda Twitter ayaa hakisay malaayiin akoonno ah tan iyo dhammaadkii sanadkii 2017
Twitter-ka ayaa xiray 57 milyan oo akoon dhammaadkii 2017. Faahfaahin dheeraad ah ka ogow malaayiin akoonno oo shabakadda bulshada ay xireyso.
Qiimaha Maalinta Koowaad ee Julaay 17, 2018
Shalay ayaa Amazon Prime Day bilaabatay 12-kii duhurnimo, maalin soconaya ilaa ...
Xadgudub amni oo halis ah ayaa kashifay xogta macaamiisha Telefónica
Taleefan: Jebinta amniga ayaa banaanka soo dhigeysa xogta gaarka ah ee macaamiisha. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan fashilaadan culus ee saameysay wadaha caawa.
Dukaankii ugu horreeyay ee Xiaomi ee Zaragoza ayaa daahiyay furitaankiisa
Furitaanka dukaamada cusub ee shirkada Xiaomi ee wadankeena way sii socotaa kiiskanna waxay ahayd ilaa ...
Sonos ku hadla hadda waa AirPlay 2 waafaqsan
Apple waxay ku soo bandhigtay jiilka labaad ee AirPlay, AirPlay 2, Shirkii Horumarinta sanadkii hore, ...
Isbeddel ku yimaada Twitter wuxuu sababi karaa inay tirada taageerayaashaadu hoos u dhacaan
Twitter wuxuu joojiyaa tirinta xisaabaadka la xiray sida kuwa raacsan. La soco waxbadan oo ku saabsan muuqaalka cusub ee lagu soo bandhigay shabakada bulshada.
Shaqo joojinta ku socota Amazon maalinta koowaad: ma jiro wax heshiis ah oo ay la galeen ururada shaqaalaha
Shaqaalaha Amazon ee bakhaarka San Fernando de Henares ayaa ku dhawaaqay shaqo joojin ku soo beegmeysa dabaaldega maalinta koowaad.
Apple waxay rakibtaa 1Password dhammaan shaqaalaha shirkadda
Apple waxay iibsataa shatiyada 1Password ee dhammaan shaqaalaheeda. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan hawlgalkan ay u adeegsan doonaan barnaamijka maareynta lambarka sirta ah.
Xiaomi maanta waxaa loo soo bandhigayaa dadweynaha qiimihiisu yahay 46.000 milyan oo euro
Wax yar ayaa nooga harsan inaan aragno shirkaddan weyn ee Shiinaha ee hogaamineysa dhammaan isticmaaleyaasha madaxa ...
Drake wuxuu sii deynayaa cusbooneysiinta albumkiisa Scorpion
Drake wuxuu sii deynayaa cusbooneysiinta albumkiisa Scorpion. Ogow wax badan oo ku saabsan isbeddelada lagu sameeyay maqalka iyada oo aan ogeysiis hore lagaa helin.
ZTE waxay u guuraysaa calaamadda inay ka shaqeyso Mareykanka
Marka la eego wixii ka dhacay Mareykanka iyo shirkadaha Shiinaha, ZTE wuxuu doonayaa inuu sii wado ka shaqeynta ...
Kidy: Mashiinka raadinta badbaadada leh ee carruurta
Kidy: Mashiinka raadinta badbaadada leh ee sida gaarka ah loogu talagalay carruurta. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan mashiinka raadinta ee shaandheeya waxyaabaha aan habboonayn.
Isticmaalayaasha Spotify waxay u helaan lacag celin xayeysiinta Drake ee joogtada ah
Isticmaalayaasha Spotify waxay u helaan lacag celin xayeysiinta albumka Drake. Ka ogow waxbadan oo ku saabsan lacag-dhimistaan ​​ka imanaya adeegga qulqulka.
Tesla wuxuu kudhacay bartilmaameedka 5.000 Model 3s usbuucii
Tesla wuxuu gaarayaa himilada soo saarista 5.000 Model 3s hal toddobaad gudihiis. Bilooyin dib udhac ah kadib, Tesla wuxuu ugu dambeyn gaarayaa bartilmaameedkiisa wax soosaarka Model 3.
Raadi laba meere oo cusub oo leh astaamo aad ugu eg Dunida
Koox cilmi baarayaal caan ah ayaa ku guuleystey in ay ka helaan laba meere oo cusub meel bannaan oo leh awood ay ku martigeliyaan nolosha dusheeda.
Qalabka ugu fiican ee lagu safro xagaagan
Kulaylku waa yimid markaa waxaan kuu soo qaadaneynaa badeecooyin yar oo aad ku safri karto xagaagan habka ugu raaxada badan ee suurtogalka ah.
Huawei Y5: 2018, astaamaha iyo qiimaha kala duwanaanta soo-gelitaanka cusub ee Huawei
Terminalka galka ee ay Huawei sharad ku dhigeyso sanadkan, Huawei Y5, waxaa horey looga heli karaa Spain lacag dhan 119 euro.
Wararka HBO iyo Movistar + bisha Luulyo 2018
In kasta oo xaqiiqda ah in xagaagu durba naga dhex jiro, oo isticmaalka TV-ga uu yaraaday, haddana adeegyada waaweyn ee VOD ayaa sii wadaya inay ballaadhiyaan buugooda.
Granada ayaa dhawaan yeelan doonta rasmiga rasmiga ah ee Mi Store, waa la xaqiijiyay
Kadib xanta iyo faahfaahinta meesha cusub ee suurtogalka ah ee dukaan kale oo Xiaomi ah, shirkadda Shiinaha ayaa xaqiijisay ...
Ciyaartoyda Fortnite waxay ku bixiyaan celcelis $ 80 iibsashada ciyaarta
Ciyaartoydu waxay ku qarashgareeyaan $ 80 celcelis ahaan iibsashada Fortnite. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan dakhliga weyn ee Ciyaaraha Epic-ga mahadnaqa kulankaan.
LG V40 wuxuu yeelan doonaa wadar shan kamarad ah
LG V40 wuxuu imaan lahaa shan kamaradood wadar ahaan. Ka ogow waxbadan oo ku saabsan dhamaadka-sare-sare LG oo ballan-qaadaya inuu noqon doono kan ugu fiican dhinaca sawirka.
Apple waxay ku dayactireysaa laptop-yada kumbuyuutarka khafiifka ah ee khaldan
Apple waxay ku hagaajin doontaa Macbooks kumbuyuutarrada balanbaalku cilladaysan yahay bilaash. Ka ogow wax badan oo ku saabsan barnaamijka dayactirka shirkadda Mareykanka ee laptop-yada
Agaasimihii guud ee shirkadda Intel ayaa iska casilay xiriir uu la sameeyay qof shaqaale ah
Waxay u muuqataa in Brian Krzanich, oo ah agaasimaha guud ee Intel uu ka tagayo xafiiska ka dib markii ay si rasmi ah u shaacisay inuu xiriir la leeyahay shaqaale ...
Sidee ayaad ku tiraahdaa biir afka Ruushka? Kani waa mid ka mid ah ereyada ugu turjuma badan adduunka
Su'aashanina waxay nooga tagaysaa qayb kale oo macluumaad aad muhiim u ah kuwa inaga ah ee adeegsada codsiyada tarjumaadda ama aaladaha ...
Bose Sleepbuds: sameecadaha-buuqa-baajinta dhagaha si hurdo fiican loo helo
Bose Sleepbuds: Sameecadaha dhagaha ee hurdo fiican. Raadi wax badan oo ku saabsan sameecadaha dhagaha ee ugu horeeya si aad uga hortagto buuq intaad seexanayso.
Kaliya maaha Tesla iyo Apple inay ka fikiraan meeraha. SEAT waxay leedahay 53.000 oo loox oo qorraxda lagu qabto
Markii aan ka hadalno tamar nadiif ah, shirkadaha Waqooyiga Ameerika ee Tesla ama Apple, iyo kuwo kale oo badan, maskaxda ku hayaan ...
Holidu wuxuu bilaabayaa App Instant u gaar ah oo loogu talagalay Android
Holidu wuxuu ku dhawaaqayaa bilaabida barnaamijkeeda Instant ee loogu talagalay Android. Raadi wax badan oo ku saabsan mid ka mid ah barnaamijyadii ugu horreeyay ee degdegga ah ee qaybta dalxiiska.
Hoyga Google iyo Google Home Mini oo horeyba looga heli jiray Spain
Ku hadlayaasha caqliga badan ee Google, Home iyo Home Mini, ayaa horeyba looga heli karaa Spain, 159 iyo 59 euro siday u kala horreeyaan.
Si rasmi ah ayaa loo beeniyay wararka xanta ah ee ku saabsan imaatinka cayaaraha ee Netflix
Xanta ayaa soo muuqatay toddobaadyadii la soo dhaafay oo ku saabsan suurtagalnimada in Netflix ay ku dari doonto ciyaaro barnaamijkeeda si loo dhammaystiro baahida ...
Khariidadaha Google ayaan mar dambe kuu oggolaan doonin inaad ka qabsato Uber dalabka
Mar dambe kama ballansan kartid Uber barnaamijka Google Maps. Codsiga Google wuxuu tirtirayaa suurtagalnimada ballansashada marinka.
CUCA, waa baaskiil koronto ku shaqeeya oo qaadi kara laba rakaab ah
CUCA waa baaskiil koronto leh oo masaafo ahaan gaaraya 40 kiiloomitir taasna waxay bixisaa suurtogalnimada in la qaado ilaa laba rakaab ah
Kapersky oo isha ku haya Midowga Yurub
Kapersky softiweerka amniga ma maraayo waqti fiican baarlamanka yurubna wuxuu rabaa inuu ka saaro ...
Dhammaadka muranka, Mr. Granbomba waxaa lagu waayey dambiga kiiska Caranchoa
Kadib amarka garsooraha, khilaafku wuu dhamaaday, Mr. Granbomba waxaa ku waayey dambi kiiska "Caranchoa" hay'ad awood u leh.
Apple waxay sheeganeysaa inay 1,76 milyan shaqo ka abuurtay Yurub. Taasi waa run?
Apple waxay sheeganeysaa inay 1,76 milyan shaqo ka abuurtay Yurub. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan warbixinta shaqaalaynta shirkadda Cupertino.
Tani waa cusbooneysiinta cusub ee Microsoft Office 365
Waxaan helnay mid ka mid ah cusbooneysiintii ugu habbooneyd bilihii dhowaa ee Xafiiska 365, oo leh hagaajinta naqshadeynta iyo xoogaa yutiilitida ah.
Lenovo ThinkPad P52, bahal wata 128 GB oo RAM ah
Lenovo Thinkpad P52, laptop ah oo raba inuu na siiyo suurtagalnimada inaan wax badan tusin waxna aan ka yarayn 128 GB oo RAM ah.
Nidaamka badbaadada guriga ee Ring wuxuu ku baxayaa suuqa $ 199
Waxaan baranay in bisha afaraad ee bisha Luulyo nidaamka amniga Giraan uu ku dhici doono suuqa Waqooyiga Ameerika $ 199.
Dhamaan wararka PlayStation ee E3 2018
Kuwani waa dhammaan wararkii Sony ee loogu talagalay PlayStation ee jaaliyadaha caalamiga ah ee Japan ay ku soo bandhigeen E3 2018.
Farshaxanka elektaroniga E3 2018 dib u soo celinta
Shirkii ugu horreeyay ee muhiim ah ee E3 2018 waxaa matalayay Farshaxanka Elektarooniga ah halkaana wararka lagu muujiyo maqnaanshihiisa.
Porsche Taycan, kani waa magaca shirkadda ugu horreysa ee baabuurka korontada 100%
Howlgalka Porsche E wuxuu horey ulahaa magac ganacsi. Tani waxay noqon doontaa: Porsche Taycan, gaariga ugu horreeya ee korantada 100% ee shirkadda Jarmalka
Facebook waxay siisay xogta isticmaale shirkadaha qaar
Facebook waxay siisay xogta adeegsadaha shirkadaha qaarkood. Waxbadan ka ogow heshiisyada ay shabakada bulshada ku lahayd inay bixiso xogtaan.
Shirkadda ZTE ayaa heshiis la gashay Mareykanka si ay howlaheeda u sii wadato
ZTE wuxuu gaadhay heshiis si uu awood ugu yeesho inuu kusii shaqeeyo. Raadi wax badan oo ku saabsan heshiiska ay soo saaraha Shiinaha ay la gaareen Mareykanka si ay u awoodaan inay mar labaad soo saaraan.
Tesla wuxuu muujinayaa sawirka rasmiga ah ee ugu horreeya Model Y
Shirkadda Tesla ayaa soo bandhigtay sawirkii ugu horreeyay ee rasmi ah ee Model Y. Ka ogow wax badan oo ku saabsan gaariga cusub ee nooca, kaasoo noqon doona SUV yar oo ay tahay in la soo saaro sannadkan.
Norman: Sirdoonkii ugu horreeyay ee macmal ah ee u fikira sida maskaxda
Norman: Sirdoonka farshaxanka ah ee u fekera sida maskaxda. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan sirdoonka macmalka ah ee ay soo saareen cilmi baarayaal ka socda MIT.
Muusig bilaash ah iyo buugaag leh rukunka Amazon Prime
Rugta ganacsiga elektaroonigga ah ayaa hadda ballaarisay tirada adeegyada ay na siiso iyada oo loo marayo khidmadda Amazon Prime.
Xaqiijiyay: Amazon waxay bilaabi doontaa Echo iyo Alexa gudaha Spain sanadkan
Amazon waxay sanadkaan bilaabi doontaa Echo iyo Alexa kuhadla Spain. Ka ogow waxbadan oo ku saabsan daahfurka ku hadlayaasha magaca cusub ee Isbaanishka ee dhawaan suuqa soo geli doona.
Macaamiisha Tesla waxay isku dayi karaan otopilot-ka cusub bilaash
Macaamiisha Tesla waxay isku dayi karaan otopilot-ka cusub bilaash. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan go'aanka shirkadda ee ay macaamiisha ugu oggolaatay inay si bilaash ah isugu dayaan xoojintaas.
Sharp wuxuu qaabeeyaa iibsiga qaybta PC-ga ee Toshiba
Sharp wuxuu sameeyaa iibsashada Toshiba qaybteeda kombiyuutarka rasmiga ah. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan hawlgalkan uu Sharp dib ugu soo laabanayo qaybta kombiyuutarka.
Tesla wuxuu dib u soo celiyey in ka badan 20% boos celis ah Model 3
Tesla waxay dib u soo celisay 23% duubista Model 3. Wax badan ka ogow baajinta gaariga sababo la xiriira dhibaatooyin badan oo soo saarkeeda ah.
Dhamaan sheekooyinka cusub ee iOS 12 ee ay soo bandhigtay Apple intii lagu jiray WWDC18
Waxaan kuu soo qaadaneynaa soo koobid leh dhammaan wararka ay soo bandhigtay Apple intii lagu jiray WWDC18 ee iOS 12 iyada oo ah nidaamkeeda ogeysiiska cusub iyo Xaqiijinta Dareenka.
Microsoft waxay iibsatay GitHub, heshiiska maanta la shaacin doono
Microsoft waxay ku dhawaaqday iibsashada rasmiga ah ee GitHub. Ka ogow wax badan oo ku saabsan hawlgalkan ay shirkadda Mareykanku ku dhawaaqeyso iibsashada bogga koodhka koodhka.
Facebook ayaa ka saari doonta qaybta isbeddelaysa
Facebook ayaa ka saari doonta qaybta isbeddelaysa toddobaadkan. Dhamaadka qaybta isbeddellada ee shabakadda bulshada ayaa soo socota, taas oo horeyba uga shaqeynaysay xalal cusub.
Spotify waxay hoos u dhigeysaa siyaasadeeda nacaybka
Spotify waxay saxaysaa siyaasadeeda nacaybka. Raadi wax badan oo ku saabsan go'aanka ay shirkaddu dib ugu laabatay ka dib murankii toddobaadyadan.
Canon EOS-1V: Kaameradda analogga mar dambe lama iibin. Ka ogow wax badan oo ku saabsan dib u soo celinta kamaraddii ugu dambeysay ee analogga laga soo qaatay nooca Japan.
Kuwani waa bilaash 'PlayStation Plus' iyo 'Live with Gold games' bisha Juun 2018
Hoos waxaan ku tusineynaa kuwa bilaashka ah ee ay Sony iyo Microsoft labadaba noogu soo bandhigaan adeegyadooda ku xirnaanta Xbox iyo PlayStation
Dhibaatada 76: Fallouth Cusub oo Soo Bandhigaysa Bethesda
Dhibaatada 76: Ciyaarta cusub ee qarsoodiga ah ee Bethesda. Raadi wax badan oo ku saabsan trailer-ka cusub ee shirkadda ee ciyaarta, kaas oo ballan-qaadaya inuu aad uga duwanaan doono qeybaha kale
Microsoft waxay soo saartay bog internet oo ammaan ah oo loogu talagalay carruurta
Carruurta MSN: Websaydhka wararka ee Microsoft ee carruurta. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan bilaabista boggan shirkaddan oo ay ku jiraan warar iyo waxyaabo loogu talagalay carruurta.
Heerka Dhiigga ee laga helay Neef Madoobaadka ah
Waxay helayaan heer Dhiig-kar ah oo ku jira Neef Madoobaadka ah oo sidoo kale ku socda GTA V. Soo ogow sheekadan xiisaha leh ee hubaal dareenkaaga soo jiidan doonta.
Xiaomi waxay diyaarinaysaa dukaan rasmi ah oo rasmi ah oo u dhow Apple Store oo ku yaal Puerta del Sol
Waxaanan wali ka hadlaynaa Xiaomi oo ku jirta Actualidad Gadget ka dib falanqaynta cajiibka ah ee cusub ee Xiaomi Mi Mix 2S ...
Fortnite wuxuu ka digayaa khiyaanooyinka V-Bucks ee bilaashka ah YouTube
Fortnite wuxuu ka digayaa khiyaanooyinka V-Bucks ee YouTube. Ka ogow wax intaa ka badan oo ku saabsan khiyaanooyinkan doonaya inay ka helaan xogta ama lacag adeegsadayaasha ciyaarta caanka ah ee Epic Games.
Sony waxay qireysaa in dhamaadka wareegga PlayStation 4 uu dhow yahay inuu yimaado
Shirkadda Japan waxay xaqiijineysaa in dhamaadka wareegga PlayStation 4 ee suuqa uu durbaba dhici doono. Marka dhulka ayaa loo diyaarinayaa imaatinka qalabkaaga cusub. Waxbadan ayaan ka ogaan doonnaa qorshooyinka Sony dhawaan.
Google, Facebook iyo inbadan ayaa durba ka boodi lahaa GDPR
Shirkadaha sida Google iyo Facebook ayaa lagu eedeynayaa inay mar hore ka boodeen sharciga cusub ee ilaalinta xogta Yurub, waana sababtaas sababta looga codsaday inay siiyaan 7.000 milyan dadka isticmaala.
Tesla wuxuu dejiyaa Dacwada Waxqabadka Fasalka ee ka dhanka ah Autopilot-keeda
Tesla wuxuu dejiyaa Dacwada Waxqabadka Fasalka ee ka dhanka ah Autopilot-keeda. Ka ogow wax badan oo ku saabsan dejinta shirkadda ay ka gaadhay dhibaatooyinka Autopilot.
Waa maxay GDPR sidee se annaga macaamiisha ah noogu saameynayaa?
Shalay ayaa ahayd maalintii ugu dambeysay ee ay ahayd in shirkaduhu la qabsadaan Xeerka cusub ee Ilaalinta Xogta Guud (GDPR oo loo soo gaabiyay Ingiriis)
Mareykanku wuxuu baarayaa wax isdaba marinta qiimaha suurtagalka ah ee Seeraar
Mareykanku wuxuu baaraa wax is daba marinta sicirka ee Bitcoin. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan baaritaankaan oo lagu doonayo in lagu ogaado haddii sicirka cryptocurrency loo adeegsaday.
Shirkadda Spotify ayaa bixin doonta 112 milyan oo doolar si loogu isticmaalo muusig bilaa rukhsad
Shirkadda Spotify ayaa bixin doonta 112 milyan si ay u adeegsato muusig aan ruqsad u haysan. Ogow wax badan oo ku saabsan lacagta tirada badan ee ay tahay inay shirkaddu bixiso.
Uber inay ka furato Paris xarun casri ah
Uber waxay isu diyaarineysaa inay Xarun Farsamada Casriga ah ka furato Paris. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan xarunta shirkadda cusub ee ay ku horumarin doonaan tagaasida duulista ah.
Facebook wuxuu abuuraa sirdoon macmal ah oo wax ka beddelaya heesaha iyo qaababka muusikada
Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan sirdoonka cusub ee macmalka ah ee shirkadda ee awood u leh inay si fudud ugu beddelaan nooca muusikada ilbiriqsiyo keliya. Sirtan macmalka ah ee Facebook ayaa suuqa soo gali doonta dhawaan.
Google ayaa lagu eedeeyay inay si sharci daro ah u shaacisay magacyada dhibanayaasha kufsiga
Google ayaa lagu eedeeyay in ay shaacisay magacyada dhibanayaasha kufsiga. Dhibaatooyin cusub oo xagga sharciga ah oo soo food saaray shirkadda Mareykanka ah, ayaa lagu eedeeyay inay ku soo bandhigtay magacyada dhibbanayaasha kufsiga mashiinkeeda raadinta.
Shirkadda Amazon ayaa ka iibisay maamulka shirkadda tignoolajiyadda aqoonsiga wajiga
Shirkadda Amazon waxay ka iibisay teknolojiyadeeda aqoonsiga wajiga maamulka. Raadi wax badan oo ku saabsan nidaamka shirkadda, oo ay iibiyeen munaasabado kala duwan si ay u adeegsadaan mas'uuliyiinta.
Netflix waxay heshiis la gashay shirkadda Obamas si loo horumariyo mashaariicda
Netflix iyo Obamas waxay saxiixeen heshiis lagu abuurayo mashaariic. Saxiix la yaab leh oo ay sameysay shirkadda Netflix oo ku dhawaaqeysa wada shaqeyn ay la leeyihiin Obamas si loo horumariyo mashaariic wadajir ah.
Madaxa tagaasida duula ee Uber ayaa ka tagaya shaqadiisa
Madaxii tagaasida ee duulayay Uber ayaa is casilay. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan iscasilaadda XNUMX-aad ee ka timaadda shirkadda, kiiskan qofka mas'uulka ka ah mashruuceeda ugu hanka weyn.
Raacitaanka shabakadda tunnel ee Shirkadda Caajis waxay ku kacaysaa hal dollar
Marinnada Shirkadda Caajis ayaa ku kici doona isticmaalaha hal doolar. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan mashruucan Elon Musk si loo horumariyo isu socodka magaalada.
Qaar ka mid ah degellada ku yaal Ameerika ayaa ka mamnuuci doona gelitaanka Yurub sharciga ilaalinta xogta
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan cabbirka bogag badan oo ku yaal Ameerika ay tixgelinayaan maxaa yeelay ma haystaan ​​waqti ay kula qabsadaan sharciga cusub ee ilaalinta xogta Yurub.
Shirkadda Facebook ayaa tirtirtay 583 milyan oo akoonno been abuur ah sannadkan
Facebook ayaa meesha ka saartay 583 milyan oo akoonno been abuur ah sannadka 2018. Faahfaahin dheeraad ah ka ogow tirada tirada badan ee akoonnada beenta ah ee shabakadda bulshada ay ka saartay illaa iyo sannadkan.
Hadda waxaad codsan kartaa Movistar inuu laba jibaaro xawaaraha faybarkaaga
20-ka Maajo ayaa timid, sidaa darteed waxaan hadda ka codsan karnaa Movistar in la ballaariyo xawaaraha isku xirka internetka sida lagu dhawaaqay bishii Diseembar ee la soo dhaafay.
Fiidiyowga oo muujinaya sida Google u ururiyo xogta ugu badan ee gaarka loo leeyahay ee isticmaalayaasha
Fiidiyowgaan ayaa muujinaya qorshayaasha Google ee ku aaddan helitaanka xog badan oo gaar ah. Raadi wax badan oo ku saabsan fiidiyowgan oo aad ku arki karto qorshooyinka shirkadda si ay u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isticmaalaha.
In kasta oo wax waliba jiraan, Trump ma awoodi doono inuu ka fogaado cunaqabateynta saaran ZTE
Waxay u muuqataa in isku dayga Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump, ee cunaqabateynta ka dhanka ah ...
Apple waxay iibisay 600.000 HomePods rubacii koowaad ee sanadka
HomePod-ka Apple ayaa iibiyay 600.000 oo unug sannadkan. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan iibka uu leeyahay qofka ku hadla magaca sumcadda leh, kaas oo aan ka badnayn waxyaabaha laga filayo.
Tidal ma uusan siinin shirkadaha diiwaan gelinta xuquuqda heesta bilo
Tidal ma uusan siinin shirkadaha diiwaangelinta xuquuqda bilooyin. Raadi wax badan oo ku saabsan arrimaha cusub ee saameynaya Tidal maanta.
Samsung waxay u isticmaali doontaa Bixby qalabkeeda
Samsung waxay u isticmaali doontaa Bixby qalabkeeda guriga. Ka ogow wax badan oo ku saabsan qorshayaasha shirkadda si ay u ballaariso isticmaalka kaaliyeyaasheeda alaabooyin badan oo ka mid ah inta u dhexeysa.
Instagram ayaa kula socodsiin doonta inta jeer ee ay maalin walba ku qaataan shabakada bulshada
Instagram ayaa kula socodsiin doonta inta jeer ee aad ku qaadaneyso barxadda. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan muuqaalka cusub ee dhowaan ku soo dhacaya shabakadda bulshada.
YouTube Premium wuxuu badalayaa YouTube Red waxaana laga heli doonaa Spain
Google dib ayey ugu laabatay howlaheeda waxayna markale badashay magaca adeegyadeeda, si ay isugu daydo inay hesho dariiqa loo mariyo muusikada iyo muuqaalka.
Dawlada Nederland waxay u joojisay adeegsiga Kaspersky sababo amni awgood
Nederland waxay u joojisay adeegsiga Kaspersky sababo amni awgood. Ogow wax badan oo ku saabsan go'aanka dowladda dalka ay ku joojisay adeegsiga badeecada calanka ee shirkadda amniga Ruushka.
85% kharashka Netflix wuxuu aadayaa waxyaabaha asalka ah
Netflix waxay ku bixisaa 85% lacagteeda waxyaabaha ay ka kooban tahay. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan maalgashiga ay shirkaddu ku sameyso sameynta taxane asal ah iyo filim
Google Drive wuxuu yareeyaa qiimaha adeegyadiisa kaydinta wuxuuna beddelaa magaca
Raadiyaha weyn wuxuu badalay magaca keydkiisa, wuxuuna ka badalay Google Drive oo wuxuu u badalay Google One, wuxuuna ka faa'ideysanayaa fursad uu ku ballaariyo goobta keydinta.
Facebook ayaa sii wadaysa hagaajinta arimaha gaarka ah waxayna hakineysaa 200 codsi oo ku saabsan si qaldan xogta
Shabakada bulshada ayaa qabanaysa shaqo aad u weyn si ay u nadiifiso muuqaalkeeda kadib fadeexadii Cambridge Analytica. Mark Zuckerberg,…
Rick iyo Morty si ay ula soo noqdaan 70 qaybood oo cusub
Rick iyo Morty waxaa loo cusboonaysiiyay 70 qaybood oo cusub. Raadi wax badan oo ku saabsan cusboonaysiinta taxanaha ka dib hadalada mid ka mid ah abuurayaasheeda oo u maleeyay in la joojinayo.
Valve wuxuu ku dhawaaqayaa Isku-xirnaanta Tamarta Yar ee Bluetooth ee Maamulaheeda Steam
Valve wuxuu diyaarinayaa dhulka si rasmi ah loogu yimaado macruufka iyo qalabka moobiilka ee Android. Tani waxay muujineysaa ...
Sony waxay ku dhawaaqeysaa ciyaaro lagu soo bandhigi doono E3 2018
Sony waxay xaqiijineysaa cayaaraha lagu soo bandhigi doono E3 2018. Raadi wax badan oo ku saabsan cayaaraha ku yeelan doona door door ah dhacdada Juun.
Uber inay dib u bilawdo baaritaanka gawaarida iswada ee bilaha soo socda
Uber ayaa mar dhow tijaabin doonta gawaarida iswada. Raadi wax badan oo ku saabsan qorshayaasha shirkadda ee ah inay mar labaad tijaabiso gawaarideeda ka dib shilkii dhimashada ee dhacay bishii Maarso
Google Duplex wuxuu ku gudbaa imtixaanka Turing oo leh midabbo duulaya
John Hennessy, madaxweynihii hore ee Stanford iyo fulinta Alphabet, ayaa ku sharaxay shir jaraa'id kadib ...
Google Drive wuxuu soo bandhigayaa naqshad cusub
Google Drive wuxuu soo bandhigayaa naqshaddiisa cusub ee ay dhiirrigelisay Qalabka Naqshadeynta. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan naqshadeynta cusub ee ay madal kaydinta daruurtu soo bandhigtay.
Wallmart waxay ka shaandheysaa qaar ka mid ah cinwaannada la filayo E3
Wallmart Canada waxay ku dartay buugga boggeeda internetka inta badan cinwaannada arki doona iftiinka E3 ee soo socota oo dhawr toddobaad la qaban doono.
Tidal ayaa lagu eedeeyay inuu been abuur ka sameeyay tirada dhalmada ee Kanye West iyo Beyonce
Tidal oo lagu eedeeyay inuu faragaliyay tirada dhalmada. Ka ogow wax intaa ka badan oo ku saabsan eedeymahan in shirkaddu ay maareyso tirooyinka qulqulka si ay uga faa'iideysato shirkadda diiwaanka.
Wararka ugu muhiimsan Android P Beta 2
Intii lagu gudajiray dabaaldegga I / O Google, shirkii loogu talagalay horumarinta Google, ragga ka socda Mountain View waxay leeyihiin ...
Facebook wuxuu diyaariyaa qayb cusub oo xannibaadda ah
Facebook wuxuu ku dhawaaqay qaybtiisa cusub ee xannibaadda. Ka ogow wax badan oo ku saabsan qaybta cusub ee shirkadda ee sidaas ku galaysa suuqa loo yaqaan 'cryptocurrency'
Ticketmaster wuxuu baranayaa ka takhalusida tikidhada iyo hirgelinta aqoonsiga wajiga
Ticketmaster wuxuu tixgelinayaa inuu hirgeliyo qaab cusub oo lagu badbaadiyo safafka riwaayadaha. Waxay ku saabsan tahay oggolaanshaha marinka wajiga iyo tuurista qaaciddada tigidhada
Dhawaan waxaa suurtagal ah in laga duuliyo diyaarad nooca loo yaqaan 'DJI drone' aaladda leh Windows 10
Waxay u muuqataa in dhammaan kuwa isticmaala aaladda Microsoft iyo nooca loo yaqaan 'DJI brand drone' ay ku jiraan nasiib….
Cilad ku timid barnaamijka nidaamka ismaamulka ee suurtagalka ah inuu dambiile ka noqdo shilka Uber
Nidaamka iskiis u shaqeynaya ee sababay shilka Uber. Ka ogow wax badan oo ku saabsan waxa u muuqda inay sabab u yihiin shilka Gawaarida iskiis u dhaca ee Uber bishii Maarso.
Nintendo Switch Online wuxuu yeelan doonaa kaydinta daruuraha
Nintendo Switch Online wuxuu bilaabi doonaa waxqabadkiisa bisha Sebtember. Ka ogow wax badan oo ku saabsan daahfurka adeegga khadka tooska ah ee kombiyuutarka iyo noocyada rukummada ee aan helno.
2.000 oo been abuur ah oo ku saabsan aqoonsiga wajiga finalka Champions League ee ugu dambeysay
Kumaan kun oo been abuur ah oo aqoonsi wajiga ah laga helay Wales. Raadi wax badan oo ku saabsan ciladaha aqoonsiga wajiga ee sanadkii hore finalka Champions League.
NVIDIA aakhirkii waxay joojisay barnaamijkeedii muranka dhaliyay ee lamaanaha
NVIDIA waxay ku dhawaaqeysaa joojinta barnaamijkeeda lamaanaha. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan ku dhawaaqista dhammaadka barnaamijkan shirkadda wada-hawlgalayaasha ah.
Wareegga Waymo: Gaari Google ah ayaa shil galay
Ka dib markii Tesla iyo Uber, waxay ahayd arrin waqti ah ka hor intaanay ku xirnayn shirkadaha kale ee soo saara nidaamyada wadista iskiis u shaqeynaya: Waymo.
YouTube-ka waxaa ka diiwaan gashan 1.800 bilyan isticmaale bil kasta
YouTube wuxuu horeyba ugu dhawaa 2.000 bilyan oo isticmaaleyaal diiwaangashan. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan tirada isticmaaleyaasha adeegsada degelkan bil kasta.
IPhone X wuxuu ahaa taleefankii ugu iibsiga badnaa rubuca hore ee 2018
IPhone X wuxuu ahaa taleefankii ugu iibinta badnaa rubucii hore. Raadi wax badan oo ku saabsan iibinta taleefannada Apple saddexda bilood ee ugu horreeya sannadkan.
Shirkadda Spotify waxay leedahay 75 milyan oo macaamiil ah
Adeegga muusigga ee durdurinaya ee Spotify, ayaa ku dhawaaqay in ay haddaba haystaan ​​75 milyan oo macaamiil ah, halka tirada dadka isticmaala nooca bilaashka ahi ay gaadhayso 99 milyan.
Ruushka wuxuu xoojiyay go'doominta Telegram
Xayiraadda Telegram ee Ruushka ayaa lagu xoojiyay tallaabooyin cusub. Ogow wax badan oo ku saabsan tallaabooyinka cusub ee ay ka qaadeen waddanka si looga hortago adeegsadayaasha inay helaan barnaamijka.
EmerData, oo ah shirkadda qarisa maamulka Cambridge Analytica
Waxay umuuqataa inaan dhamaan laga wadahadlin arinta Cambridge Aanalytica ee dhibaatada badan. Waana tii Talaadadii la soo dhaafay aan ku dhawaaqnay ...
Telegram ayaa joojiyay ICO-keedii kadib markii ay aruurisay 1,7 bilyan oo doolar
Telegram wuxuu baabi'inayaa ICO-keeda markii ay aruurisay 1,7 bilyan. Waxbadan ka ogow sababaha ay shirkaddu u joojisay ICO-daan.
Cambridge Analytica ayaa si joogto ah u xirmeysa
Cambridge Analytica waxay xirtaa oo joojisaa howlaheeda si joogto ah. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan xiritaanka rasmiga ah ee shirkadda ka dib fadeexad ay kula kacday Facebook.
18 bilood isagoon awoodin inuu kaxeeyo baabuur maxaa yeelay wuxuu la-duuliye la ahaa Tesla Autopilot
Wax badan ka ogow xukunka nin muwaadin Ingiriis ah oo watay baabuurkiisa nooca loo yaqaan 'Tesla' oo ku fadhiyey kursiga rakaabka.
Instagram iyo WhatsApp waxay yeelan doonaan wicitaano fiidiyoow kooxeed
WhatsApp iyo Instagram waxay yeelan doonaan taageero wicitaanada fiidiyowga kooxeed. La soco waxbadan oo ku saabsan muuqaalka cusub ee imanaya labada barnaamij dhowaan.
Nidaamka infotainment-ka ee VW iyo Audi waa la jabsan karaa oo wuxuu fursad u siin karaa xogtaada
Nidaamka infotainment-ka ee VW iyo Audi ayaa meel fog laga jabsaday waxayna ogaadeen inuu soo bandhigayo macluumaad badan oo ku saabsan darawalka iyo taleefannadooda casriga ah ee ku xiran.
Kumanaan qof ayaa ka mudaaharaadaya Ruushka iyaga oo ka soo horjeeda go'doominta Telegram
12.000 oo qof ayaa ka mudaaharaadaya go'doominta Telegram ee Ruushka. Waxbadan ka ogow banaanbaxyadii shalay ka dhacay magaalada Moosko.
Jan Koum, aasaasaha iyo agaasimaha guud ee WhatsApp, ayaa shaqada ka tagaya
Aasaasaha WhatsApp iyo agaasimaha guud Jan Koum ayaa ku dhawaaqay inuu ka tagayo shaqadiisa. Waxay u muuqataa in xiriirka xun ee uu la leeyahay Mark Zuckerberg iyo go’aamadiisa aysan ku qancin.
Snapchat wuxuu qorsheynayaa inuu soo bandhigo xayeysiis 6-ilbiriqsi oo qasab ah
Snapchat wuxuu soo bandhigi doonaa xayeysiis lix-ilbiriqsi ah oo qasab ah. Raadi wax badan oo ku saabsan cabbirkan cusub ee ay shirkaddu qorsheyneyso inay soo bandhigto kaasoo abuuri doona khilaaf.
Nokia X waxaa la soo bandhigi doonaa 16-ka May
Nokia waxay si rasmi ah u soo bandhigi doontaa Nokia X 16-ka Maajo. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan taleefanka ugu horreeya ee astaanta si aad u isticmaasho qaddarinta iman doonta toddobaadyo gudahood.
Telegram wuu xirnaa dhowr saacadood sababo la xiriira kululaynta server-keeda
Barmaamijka fariimaha ee Telegram ayaa bartilmaameed u ahaa weerar DDoS ah kaasoo sababay in qaar ka mid ah adeegeyaasheeda ay kululaadaan.
Airbus iyo Audi waxay isku biiraan xoogaga si ay u xoojiyaan adeegyadooda tagaasida hawada
Airbus iyo Audi waxay sare u qaadaan adeegga tagaasida hawada ee magaalooyinka waaweyn. Wax badan ka ogow isbahaysiga labada shirkadood oo in muddo ah iskaashanayay.
Apple wuxuu ku shaqeyn lahaa muraayadaha dhabta ah ee la kordhiyay
Apple waxay ka shaqeyneysaa muraayadaha dhabta ah ee la kordhiyay. Ka ogow wax badan oo ku saabsan qorshooyinka shirkadda Mareykanka ee qorsheyneysa inay soo saarto badeecadan sanadka 2020.
Shirkada Spotify ayaa sare u qaaday qiimaha qiimihiisa Norway
Shirkada Spotify ayaa ku dhawaaqday qiimo koror ku yimid qiimaheeda Noorway. Ka ogow wax badan oo ku saabsan kor u kaca qiimaha shirkadda ee waddanka Scandinavia. Wax aysan iyagu meesha ka saareynin inay ka sameeyaan dalal kale sidoo kale.
Steven Spielberg ayaa ku andacooday inuu Mario ku ciyaaray PlayStation
Steven Spielberg ayaa u cadeeyay warbaahinta Japan intii lagu guda jiray kor u qaadida Ready Player One, inuu ku ciyaaray Mario PlayStation si loogu diyaariyo soo saarista filimka.
Alexa wuxuu bilaabi doonaa inuu yeesho xusuustiisa
Alexa's Alexa wuxuu bilaabi doonaa inuu yeesho xusuus u gaar ah. La soco waxyaabo badan oo ku saabsan astaamaha cusub ee ku soo socda kaaliyaha shirkadda dhowaan.
Polestar 1, kursiga isku dhafan ee Volvo wuxuu ku kici doonaa 155.000 euro
Polestar 1 waa koombo qaali ah oo ay soo saartay shirkadda Volvo taas oo yeelan doonta qiimo dhan 155.000 oo euro marka ay suuqa gasho sanadkan 2018
Beljimka ayaa mamnuucaya sanaadiiqda bililiqada ee ciyaaraha fiidiyowga
Sanduuqyada bililiqada ah ee ciyaaraha fiidiyowga laga mamnuucay Belgium. Waxbadan ka ogow go’aanka wasaarada cadaalada ee dalka ee ku aadan joojinta sanaadiiqda bililiqada ee ciyaaraha.
Apple iyo Twitter ka dib, hadda waa Google kan wax ka beddelaya emoji qoriga
Google waxay dooratay inay ku boodo badeecada wax ka bedelka emoticonada qaarkood, waxayna wax ka bedeshay emoticon bistoolad loogu talagalay bistoolad biyo leh keyd lagu dhisay.
Google way ku sii xumaaneysaa waxayna dooneysaa in dhamaan terminaalada cusub lagu soo bandhigo Android Oreo
Waa run in soo saarayaasha qayb ahaan lagu eedeynayo kala qaybsanaanta ka jirta Android hadda, runta ...
Spotify waxay bilaabeysaa nuucyadeeda cusub ee bilaashka ah: Muusig badan oo bilaash ah iyo macsalaameyn qaab aan rasmi aheyn
Spotify waxay cusbooneysiineysaa nooca bilaashka ah iyada oo leh horumarin kala duwan Raadi wax badan oo ku saabsan isbedelada ku yimaada dhamaadka Random Mode iyo qaab cuna 75% xog ka yar.
Kuwani waa wararka ku jira Windows 10 April Update, oo ah kii ugu dambeeyay ee ugu dambeeyay ee Windows
Microsof wuxuu ka digayaa in bisha Abriil ee Abriil la diyaarinayo, wax qabad cusub oo Windows ah oo leh astaamo badan oo cusub waxaanan kuu sheegi doonaa kuwa ugu habboon.
Kani waa qolka hudheelka ee loogu talagalay cayaartoyda uu abuuray Alienware
Tani waa sida Alienware ay ula shaqeysay hoteelka Hilton Panama City si loo abuuro waxa noqon lahaa qolka ciyaarta ee saxda ah, xaqiiqduna waxay tahay inay si aad u wanaagsan u qabteen.
Coinbase waxay xannibtay koontada WikiLeaks
WikiLeaks mar dambe ma awoodi doonto inay adeegsato koontadaada Coinbase. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan xannibaaddaas oo dhaawaceysa maalgelinta WikiLeaks iyo inay tahay inaad raadsato habab cusub oo maalgelin ah.
Netflix wuxuu bilaabaa sheekooyin u gaar ah barnaamijka loogu talagalay macruufka
Netflix wuxuu ku soo bandhigayaa sheekooyinka codsigiisa macruufka. Raadi wax badan oo ku saabsan astaantan cusub ee adeegga qulqulka ay ku soo bandhigtay barnaamijkeeda isla markaana ay dhowaan u imanayso Android.
Daisy: Robotka cusub ee Apple ee baabiiya iphone
Daisy: Robot-ka Apple-ka ee 200-iPhone iphone saacaddii burburiya. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan robot-kan Apple oo shaqadiisu tahay inuu kala saaro qaybaha qiimaha leh ee taleefannada isla markaana sidaas dib ugu warshadaynta habka ugu fiican.
Dunida Jurassic: Boqortooyadii dhacday ayaa soo bandhigtay filimkeedii ugu dambeeyay
Muuqaalka ugu dambeeya ee Jurassic World: Boqortooyada dhacday waa halkan. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan goos gooska ugu dambeeya ee qeybta cusub ee taxanaha filimka caanka ah ee sida rasmiga ah loo sii deyn doono bisha Juun.